Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan oo ku baxay xiisad ka dhex taagan Ciidamada Jabuuti iyo kuwa dowladda Federaalka. – Xeernews24
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan oo ku baxay xiisad ka dhex taagan Ciidamada Jabuuti iyo kuwa dowladda Federaalka.
9. Oktober 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale iyo wafdi uu Hoggaaminayo ayaa u safray degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, halkaasoo maalmihii u dambeeyay ay ka taagneyd xiisad gacan ka hadal gaadhay.
Dagaalka labada ciidan ayaa yimid kadib markii maamulka degmada Jalalaqsi ay iska diideen in Ciidamada Jabuuti ay hawada ka saaraan Isgaadhsiinta, xili ay howlgalo Miino Baadhis ah sameynayeen, iyagoo ka cabsi qabay in qaraxyo loo dhigo.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/10/caraale-1024x576.jpg 576 1024 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-10-09 11:06:432019-10-09 11:08:36Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan oo ku baxay xiisad ka dhex taagan Ciidamada Jabuuti iyo kuwa dowladda Federaalka.
kaftanka Siyaasadda iyo sababta Faysal Waraabe uu Jabuuti u Caayo Diyaarad shil ku gashay garoonka Aadan cadde & Wararkii ugu dambeeyey ...